नेप्से १४ सयको नजिक, बिहीवार १४०९ सम्म पुगेर फर्केको नेप्से बजार बन्द हुँदा भने १४१४ मा आइपुगेको छ
Posted: 2017-12-28 18:30:16
काठमाडौं । दुई दिन यताको बजार प्रवृत्तीले नेप्से परिसूचकले टेवा पाउने सम्भावना देखिएको छ । दुवै दिन कारोबारको मध्यमा उच्चले बढेको नेप्से अन्तिममा भने घटेको छ । नेप्से १४ सय विन्दुमा आइपुग्दा लगानीकर्ताहरुमा आत्मविश्वास बढेर गएको छ । कारोबार रकममा दैनिक रुपमा भएको वृद्धिले पनि यही कुराको संकेत गर्छ । बुधवार ७० करोडभन्दा बढिको कारोबार भएको बजारमा विहीबार ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सात कारोबार दिनमा नेप्सेले ९४ अंक भने गुमाइसकेको छ ।
किन निरन्तर ओरालो लागेको छ सेयर बजार, राजनीतिक प्रभाव कि अरू न कारण छ ?
Posted: 2017-12-26 15:10:05
काठमाडौं - प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको मतपरिणाम सार्वजनिक हुन थालेपछि ओरालो लाग्‍न थालेको पुँजी बजार परिसूचक नेप्सेमा ओरालो लाग्‍ने क्रम रोकिएको छैन। २२ मंसिरयता एकदिन मात्रै १०.५३ अंकको वृद्धिदर कायम गरेको नेप्सेमा त्यसयता हरियो चिह्‍न (उकालोको संकेत) देखिएको छैन। पछिल्लो १९ दिनमा मात्रै नेप्से परिसूचकमा ७० अंकको गिरावट आएको छ। परिसूचकमा मात्रै होइन कारोबार रकम पनि निरन्तर घटेको देखिन्छ। ...
पुँजीबजारमा एनआरएनएको १० अर्ब, नीतिगत ब्यवस्था मिलाउन धितोपत्र वोडसँग आग्रह, बजार विस्तार तथा पहुंचमा बृद्धि जस्ता संरचनात्मक सुधार कार्यहरु भई धितोपत्र बजार लगानीका लागि बढी आकर्षक हुदै गएको सन्र्दभमा एनआरएनको पछिल्लो प्रस्तावलाई सकारात्मकरुपमा लिदै नेपालको धितोपत्र वजारमा एनआरएनलाई सहभागी गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न वोर्डले कार्य अगाडि वढाई सकेको
Posted: 2017-12-25 14:26:19
काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले शेयर बजारमा १० अर्व रुपैयाँ लगानीगर्ने घोषणा गरेको छ । संघका तर्फवाट सामुहिक लगानीकारुपमा यस्तो लगानीगर्न आफूहरु तयार रहेको संस्थाका अध्यक्ष भवन भट्टले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीसँग लगानीकालागि आवश्इक नीतिगत ब्यवस्था गरेको उनले वताए । ...
पूँजी बृद्धिपछि राष्ट्र बैंकको आगामी रणनीति संस्था घटाउने हुनु पर्छ: ज्ञवाली
Posted: 2017-12-25 14:24:42
अनिल ज्ञवाली, काठमाडौं- बैंकबाटै ऋण लिएर हकप्रद शेयरमार्फत पूँजी बढाउने दिशामा पूँजी बृद्धि योजना अगाडि बढ्यो। हकप्रद शेयरबाट चुक्ता पूँजी त बढ्यो तर बैंकलाई सवल बनाउने जुन उद्देश्य हो, त्यसमा भने कमजोरी भयो। पूँजी वृद्धिलाई अर्थतन्त्रले ...
शतप्रतिशत बोनस वितरण गर्न स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले कहिले तोक्यो बुकक्लोज ?
Posted: 2017-12-22 14:29:32
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत बर्षको मुनाफाबाट शतप्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न पुस १६ गते आईतबारदेखि सेयरधनी किताब बन्द गर्ने भएको छ । यसअनुसार पुस १३ गते विहीबार अर्थात पाँच कारोबार दिनभित्र बैंकको सेयरधनी कायम रहेका लगानीकर्ताले मात्र बोनस पाउनेछन् । चार्टडले यसअघि नै पुस २६ गते आर्मी अफिर्सस क्लब भद्रकालीमा दिउँसो १ बजे ३१ औँ बार्षिक साधारण सभा बोलाइसकेको छ । उक्त साधारण सभाले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई एक बराबर एक कित्ताका दरले बोनसका साथै कर प्रयोजनका प्रतिसेयर ५ रुपैयाँ २६ पैसाको दरले नगद लाभांस वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।...